Madaxweyne Lafta-gareen oo gaaray Magaalada Xudur (SAWIRRO) – AfmoNews
Madaxweyne Lafta-gareen oo gaaray Magaalada Xudur (SAWIRRO)
Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa maanta gaaray Magaalada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ka ambaxay Magaalada Baydhabo ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay Garoonka Diyaaradaha ee Xudur.
Madaxweynaha oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Xudur ayaa sheegay in uu magaalada u yimid ka jawaabidda cabashada xargaha goysatay ee dadka deegaanka ka soo yeereysa.
Madaxweynaha ayaa qiray in xaalad adag oo bani’aadanimo ay ka jirto Xudur, taa oo ka dhalatay dhibaatooyin dadka deegaanka uga imaanaya maleeshiyada Al Shabaab oo wadooyinkii xiray, gaadiidkii ganacsiga keeni jirayna wadooyinka ku gubaaya.
“Maanta waxaan u nimid arrimo shaqo oo ku soo gaarnay Degmada Xudur oo ah Xarunta Gobolka Bakool, oo sida aad la socotaanba muddadaanba ay ka jirtay cabasho bani’aadanimo, daruuf ka timid cunaqabateyn iyo dhibaato muddo dheer ku soo socotay, laguna haayay guud ahaan dadka Gobolka Bakool degan iyo Koonfur Galbeed oo dhan, laakiin si gooni ah muddadii dambe u saameysay Degmada Xudur.” Ayuu yiri Madaxweyne Lafta-gareen.
Lafta-gareen ayaa yiri “Adeegyadii ganacsatada culeyso iyo khasaaro badan ayaa soo gaaray, laba jeer oo isku xigto ay gubteen toban iyo toddobo baabuur oo dad ganacsato ah oo reer Xudur ay lahaayen, sidaasi darteedna uu jidadkii u xirmay.”
Safarka uu xilligan Madaxweynuhu ku tagay Magaalada Xudur ayaa ku soo aadaysa, saacado yar uun ka dib, markii uu Siyaasiga Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe) sheegay in xaaladdii ugu adkeyd ay maanta wajaheyso magaaladaasi.